Indlu entsha emthubi entliziyweni yeBotucatu
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Cristina
Ukuza eBotucatu ngomsebenzi okanye nangasiphi na esinye isizathu, qinisekisa ixesha lakho lokuphumla xa ufika eCasa Amarela, eQuintal Copaiba.
Yenzelwe ukubonelela impilo-ntle, impilo kunye nentuthuzelo kwabo beza kuhlala apha.
Ihonjiswe ngombala otyheli kwaye ibekwe phambi kweCopaiba Quintal, indawo eqhelekileyo kunye neCasa Vermelha kunye neCasa Azul.
Inobumfihlo obupheleleyo, kwaye ixhotyiswe ukuze abo bafikayo bazive besekhaya.
EQuintal da Casinha Amarela, iindwendwe ziyakwazi ukuhlamba echibini elishushu kunye ne-hydromassage kunye nonyango lombala, kwaye zibe namaxesha azolileyo ngoxolo. Indawo yayiyilwe kwaye yenzelwe ukuphumla nokuphumla.
Nangona iyadi yabelwe, okwangoku sihlonipha umgama, sishiya ukusetyenziswa okukhethekileyo kwiindwendwe, ngelixa beyisebenzisa.
Nantsi indlu enkulu esandula ukulungiswa kwaye yatshintshwa yazizindlu ezintathu ezipheleleyo nezixhotyisiweyo, zonke zijonge ngasemva kweyadi ekwabelwana ngayo enedama elishushu kunye ne-hydro. Ndihlala kwenye yazo (eblue) nomyeni wam, kwaye ndirenta ezinye ezimbini, indlu ebomvu kunye nendlu emthubi. Ngeli xesha, nangona iyadi kunye ne-pool kwabelwana ngayo, siyakuhlonipha ukuhlala wedwa kunye nomgama wentlalo, sigcina ukusetyenziswa kweyadi kunye ne-pool kuphela kwiindwendwe ezihlala kwindlu erentwayo.
ICasa Amarela ibekwe kumbindi weBotucatu, kufutshane neZiko leMbali kunye neSekethe yeNkcubeko. Kufuphi kakhulu kwiikhefi ezininzi ezinomtsalane kunye neeresityu, ukhetho lokutya okuphilayo, kunye neekliniki zempilo.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Cristina
Ndiyathanda ukonwaba neendwendwe, xa nazo zizimisele, kodwa ndiyazi nokuba siyawafuna amaxa ethu oxolo, kunye nentlonipho kwabo babonakalisa ukuba bakhetha ukuba bucala.
Okwangoku, siyayihlonipha imithetho yokuzahlula kunye nomgama, ukongeza ekuzibopheleleni kucoceko, ngokuzijonga kwaye uzikhuphele ngaphandle, kunye nokusetyenziswa okugciniweyo kwephuli kunye neyadi.
UMaria Cristina yi-Superhost